आश लाग्दा ब्याट्सम्यान नै धर्मराएपछि.....
ई-खेलकुद २०७६ माघ २२ , बुधबार ०५:०२ मा प्रकाशित
काठमाण्डौ । व्याटिङको समस्या नेपाली क्रिकेटको परम्परागत रोग नै हो । एकाध खेल बाहेक नेपालले व्याटिङबाट उत्कृष्ट ईनिङस खेल्न सकेको छैन्् । ओपनिङ लाईनअपदेखीनै देखिने यो समस्या समाधानका लागि अनेकौ प्रयोग भने नभएका होईनन् । तर अहिलेसम्मका सबै प्रयोग असफल सिद्ध भएका छन् । ओपनिङ लाईनअफ मात्र होईन भरपर्दा र आश गरिएका ब्याट्सम्यानहरु महत्वपुर्ण खेलमा चुक्दा नेपाल अप्रत्यासी नतिजाको सिकार हुने गरेको छ । त्रिबि क्रिकेट मैदानमा आजबाट सुरु भएको त्रिकोणात्मक सिरिजको उद्घाटन खेलमा पनि नेपालले सोहि नियती भोग्नुपर्यो ।
टोलीकै अनुभवी र महत्वपुर्ण खेलाडीहरु पारस खड्का र कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले ओपनिङ गरेको खेल १ सय ७९ रनमै टुंगीन पुग्यो । टोलीको स्कोरमा मात्र ४ रन हुदाँ दुबै ओपनर पभेलियन फर्किएपछि नेपाली टोलीको लय गुमेको सहजै अन्दाज जो कोहिले लगाएका थिए । शरद भेषावकर र दिपेन्द्रसिंह ऐरीले केहि बल लगाउन खोजेपनि सफल बन्न सकेनन् । पारस र ज्ञानेन्द्रसंगै टोलीमा निक्कै नै आशा गरिएका आरिफ शेख, रोहित कुमार पौडेल, बिनोद भण्डारी, करण केसीले आशातित प्रर्दशन गर्न नसकेपछि १ सय ९८ रनको लक्ष्य भेट्न पनि नेपाली टोली असफल बन्यो ।
कमजोर तयारी तथा खेलाडीहरु माथीको अधिक आशाको परिणाम आम नेपाली क्रिकेटप्रेमीले यसपटक पनि भोग्नुपर्यो । हजारौ दर्शकको साथ र घरेलु मैदानको उपयोगमा नै टोली चुक्दा आगामी खेल तथा अवे सिरिजमा नेपालको प्रर्दशन कस्तो रहला ? भन्ने चिन्ता निक्कै थपिएको छ ।
एकदिवसीय विश्वकपको छनोटका रुपमा रहेको प्रतियोगीताको पहिलो खेलमा नेपालले गरेको प्रर्दशनले आम समर्थकलाई निराश बनाएको मात्र होईन, नेपाली क्रिकेटको भविश्य बारेपनि सोच्न बाध्य बनाएको छ । के अब नेपाली क्रिकेट यसैगरी धरासायी बन्दै जाने हो ? प्रश्न हरेक कालखण्डमा अनुत्तरित बन्दै गएको छ ।
पाएका अवसरमा लगातार चुकिरहदा सिमित समयका लागि पाएका उपलब्धी सम्झेर कतिन्जेल बस्ने ? यसको जवाफ नेपाली क्रिकेटमा टड्कारो देखिएको छ । खेलाडीको फर्म नभए छनोट गर्न सक्ने विकल्प पनि सरोकारवालसंग छ । तयारी नपुगेको भए त्यसलाई सच्याउनु पर्ने विगत लामो समयको अनुभवले प्रमाणीत गरिसकेको छ । तर सरोकारवाला नेतृत्व त्यसमा गम्भीर बन्न सकिराखेको छैन् ।
हार र जितको मात्र सवाल होईन, यहि अवस्था रहि रहे नेपाललाई प्राप्त गरेका उपलब्धि जोगाउन पनि निक्कै कठिन हुने निश्चित छ ।